Nagarik Bazaar - टिभीको नयाँ रुपलाई नियाल्दा | टिभी गाइड
टिभीको नयाँ रुपलाई नियाल्दा
टिभी हेर्न सजिलो छ तर किन्न त्यति सरल नहुन सक्छ । अहिले पुराना शैलीका सिआरटी टिभी उत्पादन हुन छोडिसके पनि एलसिडी, एलइडी र ओलेड टिभीहरुको नयाँ संसारमा आफूलाई ठ्याक्कै मिल्ने टिभी भेट्टाउन समय लाग्न सक्छ ।
कुनै पनि किसिमको टिभी किन्दा यी मुख्य कुरामा विचार पु¥याउन सके खरिद गर्न सजिलो हुन्छ:
टिभी छान्दा कोठाको आकार अनुसार छान्नुपर्छ । सानो बेडरुम वा भान्सामा राख्ने हो भने २४ देखि ३२ इन्चसम्मको टिभी पर्याप्त हुन्छ । कोठा ठूलो छ र टिभी राख्ने ठाउँभन्दा बसेर हेर्ने सोफा टाढा छ भने ५० देखि ६० इन्चसम्मको चाहिन सक्छ । यसमा सम्पूर्ण परिवार सँगै बसेर टिभीको मजा लिन सकिन्छ ।
एचडी कि अल्ट्रा एचडी
टिभीको पिक्सेलले टिभीमा आउने दृश्यको स्पष्टता र विस्तृतता निर्धारण गर्छ । जति धेरै पिक्सेल टिभीको डिस्प्लेमा छ, त्यति नै टिभीको दृश्य विस्तृत र सुन्दर आउँछ । अल्ट्रा एचडी टिभीलाई फोर–के टिभी भनेर पनि चिनिन्छ, अर्थात् अल्ट्रा एचडी टिभीमा सामान्य एचडी टिभीभन्दा ४ गुना राम्रो डिस्प्ले हुन्छ । अहिले आउने च्यानलमा कुनै पनि फोर–के च्यानल छैनन् र टिभीमा हेरिने चलचित्र पनि प्रायः एचडीमै हुन्छन् । निकट भविष्यमा अहिले एचडी च्यानल चर्चित भएजस्तै फोर–के च्यानल पक्कै आउँछन् र फोर–के टिभी लिँदा धेरै वर्षसम्म आउटडेटेड हुँदैन ।
टिभी भित्तामा टाँगेर राख्ने चलन बढ्दो छ । भित्तामा टाँग्दा टिभीको साइज सोचेको भन्दा १–२ इन्च ठूलो चाहिन सक्छ । पोर्टहरु टिभी स्क्रिनपछाडि छन् भने भित्तामा टाँग्न बाहिर तान्न मिल्ने वाल माउन्ट चाहिन्छ । टिभी कसरी हेर्ने हो, त्यही अनुसार वाल माउन्टको एंगल मिलाउनु पर्छ ।
अहिलेका प्रायः टिभीमा ६० हर्जको रिफ्रेस रेट हुन्छ । रिफ्रेस रेटले कुनै पनि तस्बिर कति चाँडो अपडेट हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छ । ६० हर्जको रिफ्रेस रेटमा एचडी वा माथिका टिभीमा चाँडो चल्ने दृश्य छ भने कताकता अस्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले थोरैमा पनि १२० हर्ज रिफ्रेस रेट भएको टिभी छान्दा उचित हुन्छ ।
एलसिडी र एलइडी कि ओलेड ?
एलसिडी र एलइडी टिभीमा पिक्सेल बाहिरी स्रोतबाट बल्छन् । ओलेड टिभीमा भने पिक्सेलहरु आफैंले उज्यालो बनाउँछन् । एलसिडी टिभी हरेक कुनाबाट भिन्न देखिन्छ । तर ओलेड टिभीमा जताबाट हेरे पनि उस्तै स्पष्ट चित्र देखिन्छ । एलसीडी टिभीभन्दा ओलेड टिभी धेरै महँगो पर्छ ।
एचडीएमआई, युएसबी र मल्टिमिडियाका पोर्टहरु सबैभन्दा आवश्यक पार्टपुर्जा हुन् । युएसबी पोर्टमा पेनड्राइभ हालेर फोटो वा भिडियो हेर्न मिल्छ । एचडिएमआई पोर्टमा च्यानलको सेटअप बक्स, डिभिडी प्लेयर र गेमिङ उपकरणहरु जोडिन्छन् । त्यसैले कम से कम तीनवटा एचडिएमआई पोर्ट भएको टिभी खोज्नुहोला । इन्टरनेट र वाइफाई चल्ने पोर्ट अहिलेका धेरैजसो टिभीमा हुन्छन् तर सोधेर निश्चिन्त हुनुहोला ।
इन्टरनेट पनि चलाउन मिल्ने सुविधा भएका टिभीलाई स्मार्ट टिभी भनेर चिनिन्छ । तर स्मार्ट टिभी नामले नझुक्किनु होला । आहिले आउने धेरैजसो टिभीमा इन्टरनेट चल्ने फिचर हुन्छ र त्यसैले लगभग सबै टिभी स्मार्ट टिभी नै हुन् । तैपनि यी केही कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ :
तपाईंको घरमा भएका अरु इलेक्ट्रोनिक उपकरण टिभीबाटै ब्लुतुथ वा वाइफाई प्रयोग गरेर चलाउन मिल्ने फिचर भएको स्मार्ट टिभी पनि पाइन्छ । यस्तो फिचर तपाईंलाई काम लाग्छ भने त्यही अनुसारको टिभी खोज्नुहोला ।
स्मार्ट टिभीमा टन्नै एप छन् भनेर विज्ञापन गरिएको हुन सक्छ । तीमध्ये अधिकांश एप नेपालमा चल्दैनन् । यस्ता फिचर नेपालमा निरर्थक हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि टिभी किन्नुअघि सोच्नुपर्छ ।
स्मार्ट टिभी चलाउन सजिलो हुनु पर्छ । अझ पहिलोचोटि किन्दा त सरलता अझै धेरै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्मार्ट टिभी किन्नुअघि राम्रोसँग चलाएर हेर्नुहोला ।
ट्रेन्ड र टिप्स्
सेल्फि र सेल्फि फोनको लहर
नेपालका लागि बनाइएका चर्चित एन्ड्रोइड एपहरु
ट्याब्लेट रोज्दा खोज्नुपर्ने उत्तरहरु
© Copyright 2017 Nepal Republica Media Pvt. Ltd. | All right reserved.